Halloween muItaly | Absolut Kufamba
Isabel | 16/04/2021 11:05 | Yakagadziridzwa ku 16/04/2021 12:05 | Italia
Mufananidzo | Pixabay
Mazuva maviri akakosha anoratidzwa mukarenda yeItaly ndiZuva rese reVatendi (rinozivikanwawo sekuti Tutti i Santi) iro rinopembererwa musi waNovember 1 uye Zuva revakafa (Il Giorno dei Morti), rinoitika munaNovember 2. Iyo iri pamusoro pemitambo miviri yechitendero uye yemhuri hunhu apo nhengo dzayo dzinosangana kuti dzirangarire avo vasisipo. uye kukudza avo vakatsaurwa naMwari.
Mhemberero mbiri idzi dzinopembererwa munyika dzine tsika dzechiKristu asi nenzira dzakasiyana. Munyika dzeAnglo-Saxon Halloween inopembererwa ichiri munyika dzenhaka yeKaturike inopembererwa paZuva reVasande Vose uye Zuva reMweya Yese. Mune inotevera posvo isu tichaongorora mumubvunzo uyu uye kuti Halloween inopembererwa sei muItari.
1 Zuva rese reVasande rinopembererwa sei muItari?
2 Zuva reMweya Yese rinopembererwa sei muItaly?
3 Uye mune mamwe matunhu eItaly?
4 Chii chinonzi Halloween?
4.1 Halloween inopembererwa sei nhasi?
4.2 Iwe unoziva hunyengeri kana kurapwa kweHalloween?
5 Uye Halloween inopembererwa sei muItaly?
Zuva rese reVasande rinopembererwa sei muItari?
Zuva raTutti i Santi izororo rakasiyana pane iro zuva raIl Giorno dei Morti. Musi waNovember 1, vese avo vakakomborerwa kana vatsvene vakararama kutenda kwavo nenzira yakasarudzika kana vakaifira vanoyeukwa nenzira yakasarudzika uye avo, vapfuura purigatori, vakazvichenesa uye vave kutogara muumambo hwekudenga pamberi pe Mwari.
Zvakajairika muItari nedzimwe nyika dzine tsika yechiKaturike yekupemberera zuva iri nekuratidzira zvisaririra zvevatsvene mumachechi makuru nemachechi makuru.
Zuva reMweya Yese rinopembererwa sei muItaly?
Izororo renyika. Kwayedza zuva irori chikumbiro chemushakabvu chinopembererwa mumachechi uye kwezuva rese, maItaly anouya kumakuva kunounza maruva. iyo yavanokudza nayo hama dzavo dzakafa, kunyanya chrysanthemums, uye kutarisa pamusoro pemakuva evadiwa vavo. Zuva iri rinoitika musi waNovember 2 uye chinangwa charo kunamatira avo vakafa kuti varangarire ndangariro dzavo uye nekukumbira kuti Mwari vagamuchire kudivi rake.
Kune rumwe rutivi, MaTaliyane anowanzo kubika keke yechinyakare yakaita bhinzi inozivikanwa se "ossa dei morti" kunyange ichidanwa kazhinji kunzi "keke revakafa." Anogara aripo pakuungana kwemhuri mukati memazuva ano nekuti zvinofungidzirwa kuti mushakabvu anodzoka musi iwoyo kunotora mabiko.
Mhuri dzechinyakare dzinogadzira tafura uye kuenda kuchechi kunamatira avo vaenda. Mikova inosara yakavhurika kuitira kuti mweya igone kupinda mumba uye hapana munhu anobata chikafu kusvika mhuri yadzoka kubva kuchechi.
Uye mune mamwe matunhu eItaly?
Sisiri: Munguva yehusiku hweVose Vasande mudunhu rino zvinofungidzirwa kuti mushakabvu wemhuri anoda kusiira zvipo vadiki pamwe nezvibereko zveMartorana nemamwe maswiti.
Massa Carrara: Mudunhu rino, chikafu chinogoverwa kune vanoshaiwa uye girazi rewaini rinopihwa kwavari. Vana vanowanzo gadzira chishongo chakagadzirwa nema chestnuts akabikwa nemaapuro.
Monte Argentina: Munzvimbo iyi tsika yaive yekuisa shangu pamakuva emufi nekuti zvaifungidzirwa kuti pausiku hwaNovember 2 mweya wavo waizodzokera kune vapenyu.
Munharaunda dzekumaodzanyemba kweItari mutero unobhadharwa kune mushakabvu maererano netsika yekumabvazuva yechiGreek-Byzantine rite uye mhemberero dzinoitika mumavhiki kutanga kweLent.
Chii chinonzi Halloween?
Sezvandambotaura mumitsara yapfuura, Halloween inopembererwa munyika dzetsika dzeAnglo-Saxon. Mhemberero iyi ine midzi yayo mumutambo wekare wechiCelt unonzi Samhain, uyo wakaitika pakupera kwezhizha pakapera mwaka wekukohwa uye gore idzva rakatanga kuenderana nezuva rematsutso.
Panguva iyoyo Zvaitendwa kuti mweya yevakafa yaifamba pakati pevapenyu pahusiku hweHalloween, Gumiguru 31. Nechikonzero ichi yaive tsika kuita dzimwe tsika kutaura nemufi uye kubatidza kenduru kuti vagowana nzira yavo kuenda kune imwe nyika.
Nhasi, bato reHalloween rakasiyana zvakanyanya kubva pakutanga. Zvirokwazvo wakazviona zvisingaverengeki mumamuvhi! Iye zvino chirevo chinoshamisa cheHalloween chakaiswa parutivi ipa nzira kumhemberero yechimiro chinotamba, uko chinangwa chikuru chiri chekunakidzwa uine shamwari.
Halloween inopembererwa sei nhasi?
Vazhinji vanhu vanopfekedza mapati eimba kana kuenda neshamwari kumabhawa ehusiku kuti vafare pazviitiko zvine themed. Mupfungwa iyi, mabhawa, maresitorendi, madiscos uye mamwe marudzi ezvitoro anoedza kushongedza zvese zvivakwa nemusoro chaiwo wepati.
Chiratidzo chekushongedza chetsika iyi ndiJack-O'-Lantern, dzungu rakavezwa pachiso charo chekunze chine kumeso kwakasuruvara uye mukati maro makadururwa kuisa kenduru mukati nekurivhenekera. Mhedzisiro yacho inokanganisa! Nekudaro, zvimwe zvekushongedza motifs senge cobwebs, mafupa, zviremwaremwa, varoyi, nezvimwewo zvinoshandiswa.
Iwe unoziva hunyengeri kana kurapwa kweHalloween?
Vana vanonakidzwa chaizvo neHalloween. Kufanana nevanhu vakuru, Ivo vanopfeka kutenderera dzimba dziri munharaunda yavo seboka vachikumbira vavakidzani vavo kuti vavape zvihwitsi kuburikidza neanozivikanwa "hunyengeri kana kurapwa." Asi chii chinosanganisira?
Zviri nyore kwazvo! Kana uchigogodza pasuwo remuvakidzani wako paHalloween, vana vanofunga kubvuma zano kana kuita chibvumirano. Kana akasarudza kurapwa, vana vanogamuchira zvihwitsi asi kana muvakidzani akasarudza kurapwa, zvino vana vanoita koseka kana prank yekusavapa maswiti.
Uye Halloween inopembererwa sei muItaly?
Kunyangwe iri mutambo weAnglo-Saxon mavambo, yakapararira zvakanyanya muItari uye inopembererwa kunyanya nevakuru, kwete zvakanyanya nevana, saka zvakashamisa kuvaona vachiita "hunyengeri kana kurapa" kumba.
Vazhinji maItaly vanopfeka kuenda kumafaro mumakirabhu kana kudzimba kuti vanakirwe nenguva yakanaka mune shamwari, uine zvinwiwa zvishoma uye kutamba kusvika kwaedza.
MuItaly zvitoro zvakashongedzwawo neyakajairika Halloween yekushongedza motif seakadai manhanga, zvikara, macobwebs, zviremwaremwa, varoyi kana zvipoko, pakati pevamwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Halloween muItaly
Kuziva maAustralia kukwazisana